Somalia: Xildhibaanno Guddoonka Baarlamaanka u gudbinaya mooshin ka dhan ah madaxweyne Farmaajo - Wargane News
Home Somali News Somalia: Xildhibaanno Guddoonka Baarlamaanka u gudbinaya mooshin ka dhan ah madaxweyne Farmaajo
Sida lagu daabacay Wakaalada Wararka Reuters Xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in ay diyaariyeen mooshin ka dhan ah madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
Xildhibaannada ayaa ku eedeeynaya madaxweynaha qodobo ay ka mid yihiin ku xadgudubka Dastuurka, qiyaano Qaran iyo bur burinta nidaamka federaalka iyo maamul gobolleedyda.
Xildhaan Mahad Maxamed Salaad oo ka mid ah golaha shacabka ayaa u sheegay in Wakaaladda Reuters in 96 Xildhibaan ay Gudoonka baarlamaanka ay weydiisteen in Kal-fadhiga dib loo furo si ay u gubiyaan mooshinka ay ay ka wadaan madaxweynaha Soomaaliya.
Reuters ayaa sidoo kale baahisay in arintaan ay ka dambeysay kaddib markii ay xasarado siyaasadeed ka dhasheen khilaaf soo kala dhaxgalay beelaha dega gobalka Banaadir iyo hogaanka sare ee Dowladda Soomaaliya.
Xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhawaan warbaahinta u sheegay in ay laabteen saxiixa mooshin la doonayo in laga gudbiyay madaxweynaha dowladda Soomaaliya.